प्रहरी र चालकबीच झडप हुँदा तीन घाइते !
असोज ०५, २०७५ रासस
बाजुरा, अछामको साँफेबगरमा चालकको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र चालकबीच झडप हुँदा साँफेबगर नगरपालिका–४ का १८ वर्षीय प्रवीण कँुवर घाइते भएका छन् ।
घाइते कुँवरको वयालपाटामा समान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कैलाली पठाइएकोे प्रहरीले जनाएको छ । उनको दायाँ आँखामा चोट लागेको थियो । प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै गोली चलाएको आरोप चालकहरूको थियो ।
मङ्लसेनबाट आएका गाडी साँफे पक्की पुल नजिकै रोकिएपछि गाडी चालक प्रहरीमाथि जाइलागेकाले मङ्गलसेनबाट आफ्नो नेतृत्वमा आएका थप प्रहरी टोलीले हुल नियन्त्रण गर्न पाँच सेल अश्रुग्याँस चलाएको प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरीले गोली चलाएको भन्दै आक्रोशित सवारी चालकले साँफेबगर नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्नाका साथै नगरपालिकाको सवारी साधनमा तोडफोड र बजार बन्द गराएका थिए । प्रहरी निरीक्षक रावतले नगरपालिकाको भवनभन्दा माथिबाट ढुङ्गा र सिसा प्रहार गरेकाले हुललाई शान्त पार्न हवाइफायर गरिएको बताउनुभयो । ढुङ्गा प्रहारबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक र एक प्रहरी जवानसमेत घाइते भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५०८:५३
सुतली बम र खुकुरीसहित दुई जना पक्राउ !
सचिवालय बैठक बहिष्कारपछि नेकपा प्रवक्ता ‘श्रेष्ठ’ थप विवादित, पद छोड्न प्रम.सल्लाकारको सुझाव !
गल्छी–स्याफ्रुबेंसी सडक ११ दिन बन्द नहुने
सुन पसलमा पेस्तोल देखाई लुटपाट गर्ने एक पक्राउ !
२२ जना सैनिकलाई चट्याङ लाग्यो
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश भएका थिएनन् अस्वीकृत, बन्यो यस्तो ईतिहास !
३३ किलाे सुन प्रकरणः छानबिनमा तानिए ‘बाजेकाे सेकुवा’का मालिक